Misaotra Tanora Maimaimpoana - Fyrebox
Manaova Quiz manokana ho an'ny tranonkalanao na Blog
Mamorona quiz hamokatra lohamilina, hanabeazana na hanentana fotsiny ny mpihaino anao.
Raiso ny fitsidihanaMisaotra Tanora Maimaimpoana
Quiz iray, endrika roa
Ny famoronana kitapo dia afaka manampy ny orinasanao
Ataovy ny famoahana ny quiz anao manokana mba hiteraka lohamilina. Na amin'ny sehatr'asa na orinasa mankany amin'ny mpanjifa ny làlanao, dia fomba iray lehibe ahafahana mamokatra ny tranokalanao, pejy fitaterana na ao amin'ny media sosialy ny quiz.
Azonao atao ny mandefa ny angon-drakitra nangonin'ny pejinao ho azy ireo mihoatra ny 300 fampiharana.
Ampidiro mandeha ho azy ny tsingerin'entan'ny varotrao ary mitarika ny fidiram-bola.
Ny angon-angona nangonin'ny fanadihadihana anao dia ny manomboka
Ny quiz iray dia afaka mampianatra zavatra ny mpianatrao. Manomboka amin'ny sekoly ambaratonga voalohany hatrany amin'ny oniversite, ny fanaovana pizara dia mahatonga ny fampianarana hahaliana sy hahafinaritra kokoa Azonao atao ihany koa ny manandrana ny fahalalana ny mpianatrao ary miditra ny vokatra azony amin'ny fotoana tena izy.
Voarakitra an-tsoratra avy hatrany ireo mpilalao ao amin'ny pejinao sy ny valinteniny ny valinteninao.
Afaka misafidy ny mandray tatitra ho an'ny mpilalao tsirairay ianao na hanondrana azy rehetra
Ao anatin'ireo tatitra ireo dia manana fidiranao amin'ny valin'ireo mpilalao ianao, ny fotoana lanin'izy ireo amin'ny kaontinao sy ny isa azony.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanaovana quiz
Raiso ny fitsidihana
Ny kuisika koa dia azo ampiasaina amin'ny fanadihadiana miaraka. Afaka mametraka fanontaniana ianao ary mahazo miditra amin'ny antontan'isa amin'ny fotoana tena izy
Azonao atao ny miditra ny antontan'isa fanadihadihana anao amin'ny fotoana tena.
Ny antontan'isa voarakitra tamina kilianao dia manome anao ny valin'ny fikarohana ataonao eo amin'ny tsenanao amin'ny fotoana tena izy mba hahafahanao manomboka mandray andraikitra.
MISAOTRA ANISORO NY ATAO ANTOKO IZAO